Izindaba - Ukuqedwa kwepayipi elishisayo nokushisa ukushisa kuvame ukwenziwa ukushisa kokungeniswa
Steel Ikhoyili & Ishidi
Ukuphelisa ukushisa kwepayipi okushisayo nokushisa okushisa kuvame ukwenziwa ukushisa kokungeniswa
Ukuphelisa ukushisa kwepayipi okushisayo nokushisa okushisa kuvame ukwenziwa ngokushisa kwe-induction noma ukufudumeza ilangabi. Amapharamitha wezobuchwepheshe ayinhloko ukuqina kobuso, ubulukhuni bendawo nokujula kwesendlalelo okusebenzayo. Ukuhlolwa kobulukhuni kungasebenzisa i-Vickers hard tester, futhi kungasebenzisa i-Rockwell noma ukuqina kwe-Rockwell. Ukukhethwa kwamandla okuhlola (isikali) kuhlobene nokujula kwesendlalelo esiqinile esikhuni kanye nobulukhuni bendawo yombhobho oshiselwe. Lapha kuhilela ubulukhuni obuthathu.
Izakhiwo zamakhemikhali: ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokushisa okuphansi, ukumelana ne-asidi, i-alkalinity, ukumelana ne-oxidation, njll.;
Ukusebenza kwenqubo: ukunwebeka kwentambo, ukuhlolwa kokuphuka, ukugoba okuphindaphindwayo, ukugoba okuphindayo, ukuguqula ukuguqa, ukugoqa izindlela ezimbili, isivivinyo se-hydraulic, isivivinyo sokuphamba, ukugoba, ukushwabanisa, ukuthambisa, ukukhulisa indandatho, ukwelula indandatho, Inhlangano yesibonakhulu, isivivinyo senkomishi, ukuhlaziywa kwe-metallographic, njll .;
Ukuhlolwa okungonakalisi: Ukuhlolwa kwe-X-ray okungonakalisi, i-electromagnetic ultrasonic, i-ultrasonic, ukuhlolwa kwamanje kwe-eddy, ukuhlolwa kokuvuza kokuvuza kwamagnetic, ukuhlolwa okungena ngaphakathi, ukuhlolwa kwezinhlayiyana kazibuthe;
Izici zemishini: amandla okuqina, ukuhlolwa komthelela, iphuzu lokuvuna, ukunwebeka ngemuva kokuphuka, ukwehliswa kwendawo, inkomba yobulukhuni (ubulukhuni beRockwell, ubunzima beBrinell, ubulukhuni beVickers, ubunzima beLeeb, ubunzima beWebster);
Ezinye izinto: ukwakheka kwe-metallographic, inclusions, ungqimba we-decarburized, ukuzimisela kokuqukethwe kwe-microstructure, ukuhlaziywa kwembangela yokugqwala, usayizi wokusanhlamvu nokukalwa okuncane, isakhiwo samandla aphansi, ukugqwala kwangaphakathi, i-superalloy microstructure, izinga lokushisa eliphakeme lesakhiwo se-metallographic Linda.
Ukuhlaziywa kokuqhathanisa, ukukhonjwa kwempahla, ukuhlaziywa kwehluleka, ukuhlaziywa kwengxenye, ukuhlaziywa kwamakhemikhali
Ukuhlaziywa kokuhluleka: ukuhlaziywa kwe-fracture, ukuhlaziywa kwe-corrosion, njll .;
Ukuhlaziywa okuyisisekelo: ukuthola okunembile nokuhlaziywa kwama-manganese, i-oxygen, i-nitrogen, i-carbon, isulfure, i-silicon, i-iron, i-aluminium, i-phosphorus, i-chromium, i-vanadium, i-titanium, ithusi, i-cobalt, i-nickel, i-molybdenum, i-cerium, i-lanthanum ezinsimbi, ama-alloys nemikhiqizo yawo , nensimbi engagqwali, iCalcium, i-magnesium, i-zinc, i-tin, i-antimony, i-arsenic nezinye izinto zokwenziwa kwensimbi nokuqukethwe;
Isikhathi Iposi: Sep-18-2020
Indawo Yezimboni iTuanbo, Jinghai County, Tianjin, China
Ngemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma uhlu lwamanani, sicela ushiye i-imeyili yakho kithi futhi sizothintana namahora angama-24.